Ọla - DT-TotalSolutions
Ịchụso ngwaahịa ọla dị elu
Stamping na-aga n'ihu bụ ihe kacha arụ ọrụ stamping ngwọta nke nwere ike hụ na ma mmepụta mmepụta na àgwà.
Enwere ike inwe akụkụ dị iche iche nke stamping nke jikọtara akụkụ dị iche iche n'ụdị dị iche iche nke sitere na stampụ na-aga n'ihu.
Ruo ogologo oge, otu esi enyocha ogo akụkụ bụ nnukwu ihe ịma aka, ruo mgbe anyị na-eji teknụzụ ọhụụ anyị wee wụnye sistemụ CCD na stampụ na-aga n'ihu.
Usoro a na-ejikọta ọrụ nke ịlele ịdịmma gụnyere maka ọdịdị akụkụ, nyocha akụkụ, ịlele ọdịdị akụkụ.
N'agbanyeghị na ị na-achọ anwụ nkedo akụkụ mere si Alu, Zinc, ma ọ bụ Mg, anyị nwere ike na-enye gị kacha mma ọrụ na ezi uche mmefu ego.
Maka ụfọdụ akụkụ nkedo anwụ na-achọ nhazi nhazi nke abụọ dị ka mkpọpu oghere, de-burring na plating, anyị nwere ike ịnye gị ọrụ nkwụsịtụ. Nke a bụ usoro ịnwụ nkedo ọdịnala.
Iji chekwaa ọnụ ahịa mmepụta ihe nkedo anwụ anwụ, multi-slider anwụ nkedo ebubụ ihe ngwọta kasị mma. Maka akụkụ si multi-slider die nkedo ebu, ọ dịghị mkpa ọzọ ọrụ maka de-buring ma ọ bụ polishing na akụkụ elu.
Nzọụkwụ 2 ndị a nwere ike ịzọpụta gị n'efu na nnukwu ụgwọ ọrụ. Ngụkọta oge okirikiri nkedo nwere ike ịbụ ihe na-erughị sekọnd 10.
Ọnụ anyị na-enyekarị iji mee de-gating ọnwụ ngwá ọrụ + akpaaka ahịrị, n'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịtọ de-gating site ọnwụ ngwá ọrụ na automation ahịrị fọrọ nke nta kpamkpam free nke manpower ka ị nweta ikpeazụ akụkụ.
Nkedo itinye ego
Nkedo itinye ego bụ ezigbo ngwọta maka ngwaahịa igwe anaghị agba nchara nkedo mmepụta, dịka ọmụmaatụ maka akụkụ ndị sitere na 403SS na 316SS, wdg.
Nke a bụ ihe ochie nkedo ihe nkedo ígwè emepụtara na nkedo ájá. Usoro mmepụta mkpokọta dị ogologo na ngwa ngwa.
Ọ na-ewekarị ihe dị ka otu ọnwa na ọkara maka otu ogbe mmepụta. Mgbe emechara ebu si Alu. ma ọ bụ site na ígwè, a na-achọkwa ihe ọkpụkpụ wax.
Mwepu nke ngwọta a bụ: mmepụta dị ala na obere oge, chọrọ ogologo oge iji mezuo usoro zuru ezu; akụkụ akụkụ dị nnọọ nta na ndidi ma e jiri ya tụnyere injection plastic na ịnwụ nkedo n'ihi na ruo ugbu a, a ka nwere ọtụtụ usoro ka ejiri aka mee ya na ike dị arọ nke chọrọ; Enweghị ike ịmepụta ụfọdụ atụmatụ ma enwere ike ịme ya site na nhazi nke abụọ dị ka igwe igwe, mkpọpu ala ma ọ bụ polishing.
adreesị:Honglaiya ulo oru ebe, Shatou, Chang'an Town, Dongguang City, Guangdong, China.